Global Voices teny Malagasy » Vehivavy efatra malaza tamin’ny revolisiona Syriana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 11 Aogositra 2018 13:58 GMT 1	 · Mpanoratra Leila Nachawati Rego Nandika Harentsoa Tsiky Rakotoson
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Vehivavy revolisionera efatra no fantatra fa tsy hita popoka na maty nandritra ny tolona ho an'ny rariny tany Syria. Avy eo ankavia miankavanana: Fadwa Suleiman, Razan Zeitouneh, Lama Albasha, May Scaff.
Tamin'ny taona 2011, nidina an-dalambe ny Siriana mba hanao hetsi-panoherana ho an'ny rariny. Fito taona taty aoriana, amin'ireo maty maherin'ny 500.000, nihena ny fifantohan'ny media tany Syria. Ity no tantaran'ireo vehivavy Siriana efatra izay mitarika antsika ny tantaran'izy ireo manokana mba tsy hanadino ny revolisiona sy ny dikan'izany.
Fadwa Suleiman. Sary avy amin'i Rami Jarrah. Nahazoana alalana.
Fadwa Suleiman , mpiantsehatra avy any an-tanànan'i Aleppo, iray amin'ireo endrika mora fantatra indrindra tao Syria nandritra ny taona maro. Tamin'ny taona 2011, raha nipoaka ny hetsi-panoherana tao an-tanànan'i Homs , nanjary olo-malazan'ny revolisionera izy. Voahodidina mpanao fihetsiketsehana, maneho fifanoherana mahery vaika amin'ny fisehoany mahafinaritra nandritra ny volana vitsy talohan'izay ny endrik'i Fadwa miaraka amin'ny volo fohy sy keffiyeh  Palestiniana. Toa hita samihafa aza ny feony malefaka izay nanintona ny taranaka Syriana manontolo satria niaka-peo izy, ary farina tamim-pitiavana mba hanentana ireo olom-pirenen'i Homs, mangataka azy ireo hanohy ny hetsika tsy fankatoavam-bahoaka izay niaingàn'ny fifaharana manoloana izay hitan'ny maro ho fitomboan-kerin'ny fitondrana jadona. Ny zava-misy hoe izy—sy ny filoha Syriana Bashar Al-Assad—samy ao amin'ny sekta Alawite  no nihaika ny fitantaràna ofisialy mikendry hanaratsy ny hetsi-panoherana. Nandositra nankany Frantsa i Fadwa nony farany taorian'ny nanambaran'ny manampahefana ny fikasan'izy ireo hikaroka sy hisambotra azy maty na velona.
May Scaff. Sary nozaraina tao amin'ny pejiny Facebook.
May Scaff kosa dia mpilalao sarimihetsika. Tsaroako ny endrika fitalanjonana nomen'ny sakaizako azy nandritra ny fahavaratra tamin'ny taona 2008 tao amin'ny Zohin'i Baal, bar ao Damaskosy falehanay. “May Scaff izany. Tiako izy,” hoy izy tamiko, mahatonga ahy nialona ny vehivavy tsara tarehy izay nihomehy sy nandihy, voahodidina namana. Nolazaiko taminy ity tantara ity rehefa nifankahita ihany tao Amman izahay tamin'ny taona 2013, nandritra ny fihaonan'ireo mpiaro ny zon'olombelona Syriana ao Jordana, ary tsaroako fa nihomehy am-pitiavana izy. Niaraka tamin'ny sakafo sy ny zava-pisotro, nifampiresaka ela momba ny ankehitriny sy ny hoavin'ny firenena izahay, raha mbola manantena ny rariny. Tamin'ireo sariny farany, efa ho fito taona taorian'ny nanombohan'ireo hetsi-panoherana izay nandraisany anjara mavitrika, nihamafy ny tarehiny ary saika fotsy ny volony. Sarotra ny namantatra ny hatsaran-tarehiny milamina tamin'ny fotoana hafa.
Razan Zeitouneh. Sary nahazoana alalana.
Razan Zeitouneh dia mariky ny Rariny miaraka amin'ny renintsoratra R ho an'ireo Siriana nilaozana tamin'ny anjarany. Mpisolovava iray fanta-daza momba ny zon'olombelona, ​​miaro ireo gadra politika izy ary nanangana ny Fikambanan'ny Zon'Olombelona ao Syria . Mandrindra ny Vaomieran'ny Fiarahamiasa eo an-toerana ihany koa i Razan. Nahatonga azy ho lasibatry ny fitondran'i Assad sy ireo vondrona ekstremista izay niezaka hisoavaly ny fitroaram-bahoaka ny asany. Raha mieritreritra ny ho avin'ny Minisitry ny Fitsarana Syriana ny Syriana, matetika voatonona ny anaran'i Razan.
Mpianatra Lama Albasha. Sary nozarain'ireo namany tao amin'ny Twitter.
Lama Albasha, teraka tamin'ny taona 1992 ary nianatra tany amin'ny Oniversiten'i Damaskosy. Tamin'ny sary nozarainy tao amin'ny haino aman-jery sosialy, naka sary tamin'ny fakantsary izy, mitafy lobaka fotsy sy pataloha fotsy miampy zipo mavokely mba hifanaraka amin'ny kirarony misy teboteboka, ny tànany eo amin'ny valahany. Mihantona eo an-tampon'ny hijab, lamaody malaza eo amin'ny vehivavy Syriana ny solomasony miaro amin'ny masoandro. Amin'ny sary iray hafa, loha-laharana izy, manao akanjo matroka miaraka amin'ny keffiyeh Palestiniana manodidina ny tendany. Mijery ny fakantsary izy ary mitsiky. Namaky lahatsoratra aho fa nogadraina tamin'ny volana novambra 2014 tao an-tanànan'i Tal, toerana nipetrahany tao amin'iray tamin'ireo vaomiera teo an-toerana izay natsangana taorian'ny dingana voalohan'ny fitroarana tamin'ny taona 2011 izy. Namaly antso avy amin'ny vehivavy iray nilaza fa liana amin'ny fianarana manokana ny teny Anglisy izay hay fandrika izy. Nosamborina izy ary nalefa tany amin'ny sampan-draharahan'ny fiarovam-panjakana.
Telo maty, iray tsy hita
Nodimandry tany Parisy tamin'ny Aogositra 2017 ilay mpilalao sarimihetsika Fadwa Suleiman rehefa nifampitolona naharitra ela tamin'ny aretina. Tamin'ny antsafa farany nifanaovana taminy, nilaza izy hoe: “Na dia manapotika ny zava-drehetra aza izy ireo, tsy avelantsika velively hanapotika ny nofinofintsika. Raha misy Siriana iray monja tavela, dia azoko antoka fa izy no hanangana an'i Syria izay tiantsika. Tsy firenena iray i Syria, tsy fikambanana ara-jeografika izy. Fa hevitra iray izy: Revolisiona mendrika ny saina sy ny fanahy izay haharitra amin'ny fotoana sy ny habaka. “
Iray amin'ireo anarana an'arivony ao amin'ny “lisitry ny fahafatesana” malaza ratsy ilay mpianatra Lama Albasha, lisitra izay misy ireo novonoina sy maty nampijaliana tany amin'ny fonjam-panjakana. Fonja toy ny Saydnaya, izay nofaritan'ny Amnesty International ho toy ny ” trano famonoana olona” . Nahafantatra ny fianakavian'i Lama, tamin'ny fijerena ny lisitry ny fiarovana ankapobeny tamin'ny 31 Jolay 2018, fa efa maty tany an-tranomaizina taona maro lasa izy, voalaza fa noho ny aretim-po.
Tsy hita nanomboka tamin'ny desambra 2013 kosa ilay mpisolovava Razan Zeitouneh. “Ireo tahaka anay izay mandrakitra ireo maty, tsy mitomany izahay”, hoy izy nanoratra talohan'ny nakan'ny vondron'olona miafin-tava azy tao Douma tao amin'ny faritra Damaskosy. Andro vitsy monja taty aoriana, nanambara ny Firenena Mikambana fa nitsahatra tsy hanisa ireo niharam-boina tamin'ny ady tao Syria intsony izy ireo noho ny tsy fahafahany manohy izany.
Hita faty tamin'ny 27 Jolay 2018 tao amin'ny efitranony, tanàna nitadiavany fialokalofana tamin'ny taona farany niainany kosa ilay mpilalao sarimihetsika May Scaff. “Tsy ho very fanantenana aho ary mangataka aminareo mba tsy ho very fanantenana ihany koa,” izany no teniny farany tamin'ny vahoaka tao amin'ny media sosialy; “Antsoina hoe Syria Lehibe, fa tsy Syrian'i Assad ny firenentsika.”
Navoaka voalohany tamin'ny teny Espaniola tao amin'ny El Diario ity lahatsoratra ity. Nadika tamin'ny teny Anglisy izy ary nampiana fanazavana fanampiny avy amin'i Joey Ayoub .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/11/124428/
 nipoaka ny hetsi-panoherana tao an-tanànan'i Homs: https://www.nytimes.com/2011/10/02/world/middleeast/homs-syria-spirals-down-toward-civil-war.html?mtrref=www.google.com&gwh=4237BD6F219728CA2E27AB8E74A8A7CC&gwt=pay
 Fikambanan'ny Zon'Olombelona ao Syria: http://www.hras-sy.org/
 Vaomieran'ny Fiarahamiasa eo an-toerana : https://www.webcitation.org/65EV9Q1sK?url=http://www.lccsyria.org/about
 ” trano famonoana olona”: https://www.amnesty.org/en/documents/mde24/5415/2017/en/
 Navoaka voalohany : https://www.eldiario.es/tribunaabierta/mujeres-sirias_6_799380071.html